Nkowa di nkpa banyere ebe nchefu ahu bi | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
"Ebe nchefu bi" bụ ọrụ nke Luis Cernuda A na - ewepụta aha ya na amaokwu nke Bécquer na nke na - enye aha ya na abụ nke onye na - abụ abụ Spanish bụ Joaquín Sabina. Echefuru, o doro anya na ọ na-ewepụta ihe mgbu maka njedebe nke ịhụnanya bụ axis nke nchịkọta mkpokọta niile na-agagharị. Ọ bụ ụdị ọnwụ, nhichapụ ihe ncheta na-eduga onye edemede ahụ inwe nkụda mmụọ maka ihe fọdụrụ na nke bụbu mmetụta mara mma.
Nke a bụ akụkụ na-adịghị mma nke ịhụnanya, ihe na-esi na ya pụta, nke na-adịgide mgbe ọ kwụsịrị ịdị adị, na n'ụzọ ụfọdụ ọ bụ ihe ọ bụla ịbụ onye hụrụ ya n'anya na-ekpughere, ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe ọ bụla na-adịru mgbe ebighi ebi na njedebe nke usoro ịhụnanya ga-enwerịrị ụzọ echefuru nke ga-eweta mmetụta ndị na-adịghị mma dị ka ihe megidere ọnọdụ gara aga nke ọ joyụ na ọdịmma bụ isi ogidi.
Dị ka mmegide dị n'etiti ịhụnanya na obi mgbawaN'agbata ncheta na nchefu, n'etiti ọ joyụ na nkụda mmụọ, nkwenye ọzọ na-apụta na ọrụ ahụ, nke bụ otu n'etiti mmụọ ozi na ekwensu, bụ ndị na-apụta dị ka uri olu na-agwa onye na-agụ ya.
Ọrụ a bụ nke Luis Cernuda kacha mara, bụ onye, ​​ọ bụ ezie na ọ nwetaghị ezigbo nkatọ na nchịkọta mbụ nke abụ ya, toro otuto niile site na mbipụta akwụkwọ a anyị na-arụ ugbu a.
1 Ebee ka nchefu bi, akwukwo
2 Nyocha gbasara ebe nchefu bi
2.1 Akụkụ 1 nke uri
2.2 Akụkụ nke 2 nke Ebe nchefu bi
2.3 Ngalaba 3
3 Kedu ihe uri nke Ebe nchefodu bi putara
4 Okwu banyere abu
Ebee ka nchefu bi, akwukwo
Akwụkwọ Luis Cernuda N’ebe echefuru bi na nke ebipụtara n’afọ 1934, n’agbanyeghi na e dere uri ndi di n’ime ya n’agbata 1932 na 1933. N’etiti ha, otu n’ime ndi a kacha mara amara n’enweghi obi abua bu onye nyere aha ya n’aha.
Nchịkọta uri ndị a bụ nke onye edemede ahụ dere, mgbe ọ dara nwute ịhụnanya na ihe kpatara o ji ede banyere ịhụnanya dị ka a ga - asị na ọ bụ ihe ọjọọ ma ọ bụ nwee obi ilu na ya.
Na mgbakwunye, amaara na aha o nyere abụ ahụ, tinyekwara mkpokọta abụ ya abụghị ihe ọ mepụtara, kama ọ bụ na ọ lere anya onye edemede ọzọ, Gustavo Adolfo Bécquer, onye nọ na Rima LXVI, na amaokwu nke iri na ise ya, ọ na-ekwu "ebe nchefu bi."
Akwukwo a bu otutu otutu edemede, mana ihe ha nile nwere mmetụta na-enweghị atụ na enweghị nchekwube banyere ịhụnanya na ndụ. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Luis Cernuda rụchara ọrụ ya ọtụtụ katọrọ, ọ nọgidere na-anwale ma na-agbanwe agbanwe, ihe ọ rụpụtara ọtụtụ afọ mgbe nke ahụ gasịrị.
Nyocha gbasara ebe nchefu bi
N’ime nchịkọta uri, nke nwere otu aha aha akwụkwọ ahụ bụ nke a kacha mara nke ọma, na kwa nke na-agbadata isiokwu niile onye edemede dere banyere ọrụ a. Ya mere, ịgụ ya nwere ike inye echiche banyere oge ọ na-agabiga na ihe kpatara uri ndị ọzọ niile jiri bụrụ enweghị nchekwube, owu ọmụma, iru uju, wdg.
Ebee nchefu bi Amaokwu iri abụọ na abụọ kewara ụzọ isii. Agbanyeghị, mita ahụ abụghị otu otu n'amaokwu niile mana enweghị nghọta na amaokwu ụfọdụ toro ogologo karịa ndị ọzọ.
Ma stanza niile abụghị otu na ọnụ ọgụgụ nke amaokwu. Nke mbụ nwere 5 amaokwu ebe nke abụọ bụ 3; nke ato n'ime 4 ... na-ahapụ nke ikpeazụ naanị 2. Ihe ọ na-eji eme ihe nke ọma bụ akara okwu dị iche iche dịka:
Ificationdị. Tinye àgwà mmadụ, omume ya ma ọ bụ ihe ya na ihe ma ọ bụ echiche.
Foto. Ọ bụ ọnụ ọgụgụ na-ekwu okwu nke na-achọ ịkọwa ihe dị adị n'okwu.
Anaphora. Ọ bụ gbasara ikwughachi otu mkpụrụ okwu, ma ọ bụ ọtụtụ ugboro, na mbido amaokwu ahụ na n’ahịrịokwu.
Dị mfe. Tulee okwu abuo nke nwere otutu okwu n’etiti ha.
Mgbochi. Ọ na-ezo aka n’ikpughe mmegide nke echiche nke na-apụtakarị na uri.
Akara. Ejiri ya iji dochie okwu nke ozo.
Ọdịdị nke abụ a na-agbaso usoro okirikiri ebe ọ na-amalite n'echiche nke tọrọ ruo mgbe ọ gwụsịrị. N’ezie, ozigbo ị lechara abụ ahụ, ị ​​ga-ahụ na ọ na-ebido otu ihe mechiri, (ebe nchefuru biri), hiwe ụzọ atọ dị iche iche n’ime ya.
Akụkụ 1 nke uri
N'ime ya amaokwu nke 1 ruo nke 8, a ga-eme ka stanza izizi mbụ. Isiokwu kpuchie na ndị a bụ maka ọnwụ nke ịhụnanya, ọnwụ nke mmụọ, ma n'ihi mmechuihu ya n'ịhụnanya, onye edemede edekwaghị ntụkwasị obi ahụ.
Akụkụ nke 2 nke Ebe nchefu bi
N’akụkụ a, a ga-esonye amaokwu nke 9 ruo nke 15, ya bụ, stanzas 3 na nke 4. O nwere ike bụrụ na enweghi nchekwube n’akụkụ a nke abụ a ebe ọ bụ na ọchịchọ ya bụ kwụsị ikwere na ịhụnanya, gbalịsie ike chebara mmetụta ahụ echiche ma gbanahụ ihe niile m cheburu gbasara ịhụnanya.
N'ikpeazụ, akụkụ nke atọ nke uri ahụ, site na amaokwu 16 ruo 22 (stanzas 5 na 6) na-ekwu maka ịchọrọ iwepụ mmetụta nke ịhụnanya, nke achọghị ịchọ inweta ya ọzọ nakwa na ọ na-anọgide naanị dị ka ebe nchekwa na ebe nchekwa, iji kpochapụ mmetụta ahụ nke ịchọrọ ịnọ n'akụkụ mmadụ.
Kedu ihe uri nke Ebe nchefodu bi putara
Ebe nchefu bi ghọrọ maka Luis Cernuda otu ụzọ isi gosipụta ihe mgbu o nwere maka ndakpọ olileanya ịhụnanya ọ nweworo. N'ezie, nye ya ọ pụtara ịchọ ịghara inwe ịhụnanya ọzọ, ikwenyeghị n'ịhụnanya ọzọ, na ịchọ ichefu ihe niile mere.
Mmetụta ndị ahụ niile ka onye ode akwụkwọ dere na abụ a, agbanyeghị na akwụkwọ a nwere ọtụtụ ihe. Agbanyeghị, ọ bụ ikekwe nke na-emesi ike ebe ọ bụ na ọ na-ekwu maka ịdị adị nke ịhụnanya, kamakwa nhụjuanya nke na-abịa site na ikwe ka ọ buru gị. Maka nke a, mgbe ihe na-anaghị aga etu ha kwesiri ka ha kwado, ihe ọ chọrọ bụ ịla n'iyi, ịnwụ, maka na agbanyeghị na mmụọ ozi ahụ o nwere ike ịkpọ "Cupid" kpọgidere akụ nke ịhụnanya, o nwere ọ bụghị otu ihe ahụ n’ime onye nke ọzọ.
Ọ bụ ya mere, onye dere akwukwo n’agba mbo ichefu echefu echiche ojoo na ịkwụsị inwe ihe mgbu na obi nkoropụ maka icheta oge ndị ahụ ị biri.
Okwu banyere abu
A mụrụ Luis Cernuda na 1902 na Seville. Ọ bụ otu n'ime uri kacha mma nke Ọgbọ nke 27, ma ọ tara ahụhụ nke ukwuu, na-eme ka uri ya gosipụta mmetụta ọ nweburu na ndụ ya.
Ahụmịhe izizi o nwere na akwụkwọ bụ n'aka nnukwu enyi ya bụ Pedro Salinas, mgbe ọ na-agụ akwụkwọ iwu na Mahadum Seville (1919). N'oge ahụ, ọ malitere izute ndị edemede ndị ọzọ na mgbakwunye na ide akwụkwọ mbụ ya.
Na 1928 ọ gara ọrụ na Toulouse. Ọ ga-anọ ihe dịka otu afọ, ebe ọ bụ na na 1929 ọ malitere ibi na ịrụ ọrụ na Madrid. A maara na ọ rụrụ ọrụ na ụlọ ahịa akwụkwọ León Sánchez Cuesta kemgbe 1930, na mgbakwunye na isoro ndị ode akwụkwọ ndị ọzọ dịka Federico García Lorca, ma ọ bụ Vicente Aleixandre. Ọ bụ na nzukọ ndị ahụ na ndị edemede na Lorca mere ka ọ mata Serafín Fernández Ferro na 1931, nwa agbogho zuru ohi obi onye ode akwukwo. Nsogbu bụ na ọ chọrọ naanị ego ya n'aka Cernuda, na, n'emeghị ka ọ bụrụ na a ga-akwụghachi ya, ọ bụ oge ọ kpaliri abụ ahụ Ebe nchefu bi (yana abụ ndị ọzọ bụ akụkụ nke nchịkọta abụ nke otu aha). N'oge ahụ ọ gbara afọ iri abụọ na itoolu, ọ bụ ezie na edepụtara uri ndị ahụ n'oge ọ bụ nwata.
N'ezie, ọ gha akara ya nke ukwuu ebe ọ bụ na amabeghị na o nwere ịhụnanya ọzọ na-abụghị nke ahụ, yabụ ọ ga-abụ na o rubere isi n'ihe o dere na uri Ebe nchefu bi, na-apụ site n'ịhụnanya ma na-elekwasị anya mmetụta ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » "Ebe nchefu bi"